सर्लाहीका चार स्थानमा चल्यो गोली « Sagarmatha Daily News
सर्लाहीका चार स्थानमा चल्यो गोली
मलंगवा : निर्वाचनको विषयलाई लिएर झडप हुदाँ सर्लाहीका चार स्थानमा गोली चलेको छ। मतदान केन्द्रमा विवाद हुदाँ सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, धनकौल, रामनगर र चक्रघट्टा गाउँपालिकामा गोली चलेको हो।
निर्वाचनका विषयलाई लिएर विभिन्न पक्षबीच झडप हुँदा स्थितलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। झडपले केहीबेर मतदान स्थलको स्थिति बिग्रेपनि केही बेरमा मतदान सुरु भएको थियो।
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र धनकौल गाउँपालिका वडा नं. २ मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच झडप भएको थियो। मतदान स्थलमै झडप हुन थालेपछि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि करिब एक दर्जन हवाई फायर गरेका थिए।
पटक-पटक झडप हुन थालेपछि नेपाली सेना नै परिचालन गरिएको थियो। पहिले घेरामै सेनालाई राखेर निर्वाचन सुचारु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताए। झडपले स्थिति असमान्य बनेपछि मतदान करिब ७ घण्टा जति अवरुद्ध भएको थियो।
त्यस्तै चक्रघट्टा गाउँपालिका वडा नं. १ शिवनगरमा पनि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबादी झडप भएको छ। राशनारायण प्राथमिक विद्यालयमा रहेको मतदान स्थलमा दुई दलका नेता कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि प्रहरीले एक राउण्ड हवाई फायर गरेका थिए। झडपमा परेर दुबै दलका नेता कार्यकर्ता घाइते भएका छन्।
चक्रघट्टासँगै टाँसिएको बहरथवा नगरपालिका वडा नं. १७ मा दुई पक्षबीच विवाद हुदाँ दिउँसो एक बजेदेखि केही बेरका लागि मतदान कार्य रोकिएको थियो।
त्यस्तै रामनगर गाउँपालिका ४ मा पनि झडप हुँदा प्रहरीले स्थितिले नियन्त्रणमा लिनका लागि करिब १५ राउण्ड हवाई फायर गरेको छ। विभिन्न समूहबीच झडप हुदाँ स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले हवाई फायर गरेको प्रजिअ गौतमले बताएका छन्।
लालबन्दी नगरपालिकाको पनि एक स्थानमा स्थिति असमान्य भएपछि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि हवाई फायर गरेको थियो।
यी स्थानहरुबाहेक अरु स्थानमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान सम्पन्न भएको प्रजिअ गौतमले बताए। छिटफुट घटना बाहेक जिल्लाका सबै स्थानहरुमा मतदानको कार्य सम्पन्न भएको र मतपेटिका ओर्साने काम भइरहेको प्रजिअले बताए।
सर्लाहीमा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन्। जसमा ३ सय १८ मतदान स्थल र ५ सय ९९ मतदान केन्द्र राखिएको छ। २० प्रमुख, २० उपप्रमुख, २ सय वडाध्यक्ष र ८ सय वडाध्यक्ष गरी एक हजार ४० जनप्रतिनिधि चुनिने छ। जिल्लामा ४ लाख ७४ हजार ३९ मतदाता रहेका छन्।